Local News – Page2– Na Pann San
ဦးဌေးအောင် ရဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ် ကန့်ကွက်လွှာ ကို ကော်မရှင် ပယ်ချ၊ တိုင်းအဆင့် အထိ ဆက်တက်မည်ဟုဆို
ကော့မှူးမဲဆန္ဒနယ် မှာ NLD ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အဖြစ် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင် မယ့် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင် ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်အပေါ် ပြိုင်ဘက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးဌေးအောင် ရဲ့ကန့် ကွက် လွှာ တင်ချက် ကို ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် က လက်ခံစိစစ်ပြီးနောက် ဒီနေ့မှာ ပယ်ချ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အရပ်ဖက် – စစ်ဖက် ဆက်ဆံရေး အတွင်းက ပါဝါ ချိန်ခွင်လျှာ ( သို့ ) ပြည်သူတွေအတွက် ပို၍သေချာစေခဲ့ပြီ
Na Pann San W | August 15, 2020
ပို ၍ သေချာစေခဲ့ ပါပြီ… တပ် မတော် ကာကွယ်ရေး ဦး စီး ချုပ် ဗိုလ် ချုပ်မှုးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ ၃၀ ကျော်တွေ့ဆုံပြီး နိုင်ငံရေးရာတွေ၊ ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စရပ်တွေကို ပြောဆိုကြတယ် ဆိုတာ ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အရပ်ဖက်-စစ်ဖက် ဆက်ဆံရေး အတွင်း က ပါဝါချိန်
ယုန်လေး ကို ကျေးဇူးလည်း တင်တယ် ၊ လေးလည်း လေးစားတယ် လို့ ပြောလာတဲ့ ဒေါ်သက်သက်ခိုင်
ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင် ပါတီ ဥက္ကဌ ဒေါ် သက်သက်ခိုင် က “ယုန်လေး ကို ကျွန်မ လေး စား ပါ တယ် ၊ လူငယ်အနု ပညာရှင် တကယ် ကိုဖန်တီးနိုင် တာပါ ၊ ယုန်လေး က ဘာကို သိသလဲ ဆိုရင် ပြည်သူလူ ထုကြားထဲ မှာ
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ အင်တော တွင် တရားမဝင် ခိုးဝင်လာသော တရုတ်နိုင်ငံသား များ ထပ်မံ ဖမ်းဆီးရမိ
တရားမဝင် ခိုးဝင် လာသော တရုတ်နိုင်ငံ သားများ ထပ်မံ ဖမ်းဆီး ရမိမှု ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ၊ အင်တောမြို့နယ် တွင်ဖြစ်ပွား ခဲ့ကြောင်း သိ ရ သည်။ နေပြည်တော်၊ ဩဂုတ် – ၁၅ရက် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင် သော ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့သည် ယမန်နေ့ နံနက်ပိုင်း အင်တောမြို့အဝင်
သာမန်လူဦးနှောက် နဲ့ စဉ်းစားလို့လိုက်မမှီတဲ့ ( က . ည . န ) ရဲ့ ကားတန်ဖိုး သတ်မှတ်ချက်များ
မော်တော်ယာဉ် သက်တမ်းတိုး ဖို့ ပိုင်ဆိုင်သူ အမည်ပေါက် အခွန်ဆောင် ရတယ် ။ နိုင်ငံတော် ကို ကျသင့် ကျထိုက် တဲ့ အခွန်ဆောင်ရတာ လက်ခံ ပါတယ်။ ဘာမှ စောဒက မတက်လိုပါဘူး။ တစ်နိုင်ငံလုံး အများ နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စ မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဋ္ဌာန
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအား တရားမျှတပြီး ပွင့်လင်း မြင်သာမှု ရှိသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်စေရေး ယန်း (၁၈၁) သန်း အကုန်ကျခံ ဂျပန် ကူညီမည်
ဂျပန် နိုင်ငံက ” ရွေးကောက် ပွဲအကူ အညီ ပေးရေး စီမံကိန်း ” အဖြစ် ဂျပန်ယန်း ၁၈၁ သန်း ပေးအပ်မည်။ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်‌နေ့၌ ကျင်းပရန်စီစဉ် ထားသည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို တရားမျှတပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည့် ရွေးကောက်ပွဲတစ်ရပ်ဖြစ်စေရေး ဂျပန်နိုင်ငံ
နိုင်ငံရေး တွင် ပြောသည့် အတိုင်းလုပ်ရန် နှင့် လုပ်သည့် အတို င်းပြောရန် လိုကြောင်း ကာချုပ်ကြီးပြော
နိုင်ငံရေး တွင် ပြော သည့် အတိုင်း လုပ်ရန်နှင့် လုပ်သည့် အတိုင်းပြောရန် လိုကြောင်း တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦး စီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ကပြောသည် ။ သြဂုတ်လ ၁၄ ရက် နေပြည်တော် တွင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီ
သွားပုတ်လေလွင့် တိုက်ခိုက်နေမယ့်အစား ကော့မှူးမှာ သူ နဲ့ အရင်ပြိုင်ပါ ဆိုပြီး ဦးဌေးအောင်ကို အသက် ချင်း ထပ် လည် စင်းပေးကြေး စိန်ခေါ်လိုက် တဲ့ ကော့မှူးသူ
သို့ … အန် ကယ် ဦး ဌေး အောင် ။ ။ အန် ကယ် ဦးဌေး အောင်အနေ နဲ့ ကော့မှူးမြို့ နယ် မှာအမေ့ ကို သွားပုတ် လေလွင့် တိုက် ခိုက်ေ နမဲ့ အစား ကော့မူးမြို့ နယ် မှာ ဦးဌေး
လိပ်ကျွန်း လူသတ်မှု နဲ့ သေဒဏ် ကျနေသော မြန်မာ လူငယ် ( ၂ ) ဦး ကို တသက်တကျွန်း ပြစ်ဒဏ် လျှော့ပေါ့လိုက်
ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း က လိပ်ကျွန်း လူ သတ် မှု အတွက် သေဒဏ်ပေးခံခဲ့ရ တဲ့ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း လူငယ် နှစ် ဦးဖြစ် တဲ့ ကိုဝင်းဇော်ထွန်း နဲ့ ကိုဇော်လင်း တို့ တသက် တကျွန်း ပြစ်ဒဏ် အဖြစ် လျှော့ပေါ့လိုက် ပါတယ် ။ ထိုင်း ဘု
လိုင်စင်မဲ့ မော်တော်ယာဉ် တစ်စီးပေါ် မှ ကျပ်သိန်းပေါင်း (၉) ဘီလီယံကျော် တန်ဖိုး ရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ ၊ ယာဉ်မောင်းထွက်ပြေးသွား
Na Pann San W | August 14, 2020
ရှမ်းပြည် နယ် ( အရှေ့ပိုင်း) တာချီ လိတ်မြို့ နယ် အတွင်း လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်နေ သော ပူးပေါင်း အဖွဲ့ဝင်များသည် ယနေ့ နံနက်ပိုင်း တွင် လိုင်စင်မဲ့ မော်တော်ယာဉ် တစ်စီးပေါ်မှ ကျပ် သိန်းပေါင်း (၉) ဘီလီယံကျော် တန်ဖိုး ရှိ အိုက်စ်များ သိမ်း ဆည်း